War deg deg ah:Agaasime Idaacadeed oo lagu toogtey caawa magaalada Muqdisho – SBC
War deg deg ah:Agaasime Idaacadeed oo lagu toogtey caawa magaalada Muqdisho
ALLAHA u naxariistee Abuukar Max’ud Kadaf oo ahaa Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn ee magaalada Muqdisho ayaa caawa xiliga bariga Afrika lagu diley magaalada Muqdisho, xili uu ku sugnaa kadinka hore ee gurigiisa oo ku yiil degmada Wadajir.
Marxuumka ayaa dilkiisa waxaa geystey laba nin oo ku hubaysnaa baastooladu kuwaasi oo markii ay toogteen marxuumka goobta ka cararay, iyadoon la gareneyn haybtooda.
Abuukar Max’ud Kadaf ayaa wuxuu ahaa agaasimaha Idaacada Somaliweyn oo iyadu aan shaqeyn tan iyo sanadkii 2010-kii ka dib markii qalabkeeda ay qaateen xoogagii Shabaabka ee ka talinayey deegaanka Idaacadaasi ku tiil ee degmada Shibis ee magaalada Muqdisho.
Lama oga ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa dilka Marxuum Abuukar Max’ud Kadaf, waxaana la sheegay in ciidamada amaanka degmada Wadajir inay ku guuldareysteen soo qabashada dableydii dilkaasi geysatey, kuwaasi oo baxsadey ka hor intii aanay ciidamadu soo gaarin goobta dilku ka dhacay.
Dilkan ayaa ku soo beegmayaa iyadoo todobaadyo ka hor magaalada Muqdisho lagu toogtey Agaasimihii Idaacadii Shabeelle ee magaalada Muqdisho Marxuum Xasan Fantastic iyo waliba wariye Cabdisalaan Xiis oo ahaa wariyaha telefishinka Horn Cable.